१८ वर्षीय युवक जो गर्भवती छन, युवक गर्भवती कसरी बने त? यस्तो छ सबैलाई रुवाउने त्यो दुख दायी कथा ! – Online Khabar 24
आमा बन्नु हरेक महिलाका लागि सबैभन्दा विशेष पल हुन्छ । किनकी उनको शरीरभित्र उनको आफ्नै अंशको रुपमा नयाँ मान्छे बढिरहेको हुन्छ ।
मिकीको सानैदेखिको सपना थियो बच्चा जन्माउने । जुन अहिले सार्थक हुँदैछ । त्यसैले उनी निकै खुसी छन् । परीक्षणका क्रममा उनको पेटभित्र पाठेघर तथा अण्डासय लगायतका परिपक्व महिला प्रजनन अंग रहेको पत्ता लागेसँगै उनीमा सन्तान प्राप्तिको अभिलाषा जाग्यो ।
बच्चा जन्माउने आफ्नो निर्णयबाट आफ्नी आमा तथा परिवार खुसी रहेको उनी बताउँछन् । उनी आफ्नो बच्चाको जन्मको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । यो खबर केहि समय पहिलेको हो ।
Prevपेटमा पाँच बच्चा थिए, बाँचेका तीन कसरी हुर्किँदै छन् ? हेर्नुस
nextनिधार हेरेर नै थाहा पाउन सकिन्छ मानिसको स्वभाव जिद्दी छ कि बुद्धिमान छ भनेर !